Xukuumada Soomaaliya oo Faah Faahin Ka Bixisay Shirkii Somalia, Eritrea Iyo Ethiopia - News WordPress theme
Ishabaydhaba NewsWARARKAXukuumada Soomaaliya oo Faah Faahin Ka Bixisay Shirkii Somalia, Eritrea Iyo Ethiopia
Xukuumada Soomaaliya oo Faah Faahin Ka Bixisay Shirkii Somalia, Eritrea Iyo Ethiopia
Wasiirka Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska Daahir Maxamuud Geelee oo Shir Jaraa’id ku qabtay Magaalada Muqdisho ayaa faah-faahin ka bixiyay shirka seddax geesood ah ee u dhexeeyay Madaxda Soomaaliya, Eritrea iyo Itoobiya, kaasi oo ka dhacay magaalada Asmara ee dalka Eritrea.
Daahir Maxamuud Geelle ayaa sidoo kale sheegay in wasiirka Arrimaha dibadda iyo Is-kaashiga caalamiga ee Dowladda Federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad iyo Wasiirada Arrimaha Dibadda ee Dalalka Eritrea iyo Itoobiya ay ku sii jeedaan Waddanka Jabuuti, iyagoo halkaasi u tagaya sidii loo soo afmeeri lahaa colaada muddada dheer u dhaxaysay waddamada Jabuuti iyo Eritrea.
“Dadaaladaan lagu dhamaynayo colaada wadamada Eritrea iyo Jabuuti waxay ka soo bilawdeen safarkii hore ee madaxweynaha Soomaaliya uu ku tagay Eritrea, ka dibna uu tagay dalka Jabuuti isagoo la wadaagay wadahadaladii Asmara iyo mowqifka dowladda Soomaaliya ee ku aadan dhamaynta colaada labadaan dal.” Ayuu yiri wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daahir Geele.
“Soomaaliya iyo Jabuuti waxa ka dhaxayeeya wax yar oo la qiimayn karo maaha, Soomaaliya waxay kaalin mugleh ku lahayd in Jabuuti ay noqoto dal madax banaan, Jabuutina waxay dhowr iyo tobankii sano ee ugu danbayeeyay ay dadaal badan ku bixisay sidii Soomaaliya ay Nabad u noqon lahayd, maanta waxaa la soo gaaray markii Soomaaliya ay celin lahayd qayb ka mid ah abaal kaas, oo ay ka shaqayn lahayd Jabuuti oo nabad hesha.” ayuu hadalkiisa ku daray Mudane Daahir Maxamuud Geelle.